Constitution – Myanmar National Association of the Blind
+95936410672 , +959262247078
Tue – Sat:09.00-17.00
Facebook : www.facebook.com/mnabmyanmar
Burmese Text to Speech Software Launching
အပိုဒ်ခွဲ(၁) စည်းမျဉ်းဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမျက်မမြင်များအသင်း ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို ဆိုလိုပါသည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) အသင်းဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ မျက်မမြင်များအသင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၃) မျက်မမြင်ဆိုသည်မှာ မျက်စိနှစ်ဖက်လုံး လုံးဝသော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ သော်လည်း ကောင်းမမြင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ (မျက်စိမှုန်ခြင်း သော်လည်းကောင်း၊ မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခြင်း သော်လည်းကောင်း မဆိုလိုပါ။)
အပိုဒ်(၂) အသင်း၏အမည်နှင့် တည်နေရာ
ဤအသင်းကို မြန်မာနိုင်ငံမျက်မမြင်များအသင်း (Myanmar National Association of The Blind)အတိုကောက်အားဖြင့် (မမသ) (MNAB) ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
အသင်း၏တည်နေရာအဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) မြန်မာနိုင်ငံမျက်မမြင်များအသင်း၏ အမှတ်တံဆိပ်သည် မျက်လုံးပုံပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံနှင့် လမ်းလျှောက်တုတ်ပုံ ထပ်ဆင့်ရေးဆွဲထားပြီး မျက်လုံးပုံ၏ညာဖက် အပေါ်ထောင့်တွင် မ.မ.သ၊ ဘယ်ဖက်အောက်ထောင့်တွင် MNAB ဟုရေးသားထားပါသည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) အမှတ်တံဆိပ်၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
မျက်လုံးပုံသည် အမြင်အာရုံချို့ယွင်း အားနည်းသူများကို ကိုယ်စားပြုပါသည်၊ မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံသည် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်း၌ နေထိုင်ကြသူများကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ လမ်းလျှောက်တုတ်သည် မျက်မမြင်များ၏ စွမ်းရည်ဖေါ်ထုတ်နိုင်ရန် အထောက်အကူပြုမှုကို ပုံဆောင်ပါသည်။
ဆိုလိုရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်နေထိုင်ကြသော အမြင်အာရုံချို့ယွင်း အာနည်းသူများကို လိုအပ်သော အထောက်အကူပြု ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် ဘဝမြှင့်တင်ပေးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤအသင်းသည် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း၊ အမြတ်အစွန်းမရှာသောအဖွဲ့အစည်း၊ ဘာသာရေးမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
အခန်း(၂)ရည်ရွယ်ချက်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ရပ်တည်ချက်၊ ဆက်သွယ်မှုများ
ရည်ရွယ်ချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင် မျက်စိကွယ်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်းမျှသာမက မျက်မမြင်များ ဘဝတိုးတက် မြင့်မားရေးကို ဦးတည်ပြီး တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးရရှိရန်နှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတွင် လူတန်းစေ့ ပါဝင်နိုင်ရန် တို့ကို ဦးတည်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှ ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း အနေဖြင့် သော်လည်း ကောင်း မျက်မမြင်များကိုတွန်းအားပေး၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အရဖွံ့ဖြိုးလာပြီး မိမိကိုယ်ကို လေးစား၍ တာဝန်မဲ့မှု မဖြစ်စေဘဲ နိုင်ငံတကာ အသိဉာဏ်ဖလှယ်ရေး နှင့်အတွေ့အကြုံဖလှယ်ရေး အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) မျက်မမြင်အချင်းချင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချစ်ကြည်မှု၊ ညီညွှတ်မှုရှိလာစေရေး ရှေးရှုဆောင်ရွက်ရန်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) မျက်မမြင်များအချင်းချင်း တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး အပြန်အလှန်နားလည်မှု၊ လေးစားမှုရှိလာစေရေး ရှေ့ရှု ဆောင်ရွက်ရန်။
အပိုဒ်ခွဲ(၃)မျက်မမြင်များ၏ဘဝ သက်သာချောင်ချိမှု၊ မြင့်မားတိုးတက်မှု ရရှိလာစေရေး ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ရန်။
အပိုဒ်ခွဲ(၄) မျက်မမြင်များတို့၏ အသိဉာဏ်ပညာ၊ ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိလာစေရေး ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ရန်။
အပိုဒ်ခွဲ(၅) မျက်မမြင်များလူ့သိက္ခာ ပီပြင်စေရေး ရှေ့ရှု​ဆောင်ရွက်ရန်။
အပိုဒ်ခွဲ(၆) မျက်မမြင်များ မိမိတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မိမိတို့၏နိုင်ငံတော်အတွက် ကြိုးပမ်းစေရေး ရှေးရှုဆောင် ရွက်ရန်။
အပိုဒ်ခွဲ(၇) မျက်မမြင်များသည် ဥပ​ဒအရသော်လည်းကောင်း၊ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း၌ သော်လည်းကောင်း တန်းတူညီတူ အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရရှိရေး ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ရန်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) မျက်မမြင်များ၏ ဘဝမြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး၊ အားကစားနှင့်အပန်းဖြေရေး ကိစ္စများအားလုံး ပါဝင်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ရှိနေသော မျက်မမြင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် တိုးတက်ရေးတို့ကို ပိုမိုမြှင့် တင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၃) သတင်းနှင့်အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး လုပ်ငန်းများကိုတင်ပြရန် လိုအပ်သည်တို့ကို ကူညီပံ့ပိုးခြင်း။
အပိုဒ်ခွဲ(၄) ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားများ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းမှ မျက်မမြင်များအပေါ် အရှိအတိုင်း မြင်ကြပြီးလူတန်းစား မခွဲခြားဘဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသော ဆန္ဒရှိလာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
အပိုဒ်ခွဲ(၅) မျက်မမြင်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သုတေသနနှင့် လေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
အပိုဒ်ခွဲ(၆) ပညာရေးအတွက် အကူအညီလိုအပ်နေသော နေရာတိုင်းသို့ ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်း၊ ပိုမိုတိုးတက်အောင် ကူညီပေးခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၇) အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပံ့ပိုးမှုကိုရယူပြီး မျက်မမြင်များကိုပံ့ပိုးကူညီ၍ ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများကို ထောက်ပံ့ရန်နှင့်အကြံဉာဏ်ပေးရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
အပိုဒ်ခွဲ(၈) မြန်မာနိုင်ငံမျက်မမြင်များအသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်စေရန် လိုအပ်သောအတိုင်းအတာ အထိဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမျက်မမြင်များအသင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိမျက်မမြင်များအားလုံးကို ကိုယ်စားပြု၍ နိုင်ငံတော်အစိုး ရနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းလူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သော်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာ့မျက်မမြင်သမဂ္ဂနှင့် အခြားသောနိုင်ငံတကာ မျက်မမြင်အဖွဲ့အစည်းများသို့ လည်းကောင်းဆက်သွယ်၍ မျက်မမြင်များ၏ဘဝမြှင့်တင် ရေးလုပ်ငန်းများကိုကဏ္ဍ ပေါင်းစုံမှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရပ်တည်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမျက်မမြင်များ အသင်းသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များသို့ ကူညီမစသော အသင်းအဖွဲ့များအပြင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးနှင့်အခြားသောအထူး အေဂျင်စီအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တရားဝင်ဆက်သွယ်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ် ပါသည်။
အခန်း(၃)အသင်းသားဖြစ်ခြင်း၊ အသင်းဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် အသင်းသားအဖြစ်မှရပ်စဲခြင်း။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား၊ လုံးဝမျက်စိမမြင်သူ(သို့)တစ်စိတ်တစ်​​ဒေသ မျက်စိမမြင်သူ၊ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့် ပြီးသူများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော အသင်းဝင် လျှောက်လွှာပုံစံအတိုင်း လျှောက်ထား၊ အရည်အချင်းပြည့် ၍ အသင်းဝင်ကြေးပေးသွင်းသည့် အသင်းသားများဖြစ်ပါသည်။
မျက်မမြင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း(သို့) မျက်မမြင်များအတွက်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်း(သို့) မျက်မမြင်ကျောင်း များ ၊ အလုပ်ရုံများတွင် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသော မျက်မမြင်ဦးရေ အနည်းဆုံး(၂၀)ရှိပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာပုံစံအတိုင်းလျှောက်ထား၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီ၍ အသင်းဝင်ကြေးပေးသွင်းသည့် အသင်းအဖွဲ့များ ဖြစ်ပါသည်။
အသင်း၏အကျိုးကို စွမ်းစွမ်းတမံသယ်ပိုး​ဆောင်ရွက်သူ၊ အသင်းအတွက်အလှူငွေ၊ ပစ္စည်းများထူးခြားစွာ လှူဒါန်းသူ၊ အသင်း၏လုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ် ပံ့ပိုးနေသည့် ဌာနများမှပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မျက်မမြင်များနှင့် မျက်မမြင် အဖွဲ့အစည်းကို စိတ်ဝင်စား၍ အသင်း၏အကျိုးစီးပွါးကို တိုးတက်အောင် အားပေးကူညီထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးကိုပေးဆောင်ရမည်။ (မမသ) ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်သူဖြစ်ရ မည်။ အသင်းကိုစိတ်ဝင်စား၍ အသင်း၏တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းများကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ (၅) ​ဒေသဆိုင်ရာ ကော်မတီများ
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ကော်မတီများဖွဲ့စည်းနိုင်၍ ​ဒေသအတွင်း လုပ်ငန်းတာဝန်များ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားပြု ဒေသဆိုင်ရာ ကော်မတီဖြစ် ပါဝင်နိုင်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) သတ်မှတ်ထားသည့်လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်သွင်းပြီး တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် ကော်မတီမှ အသင်းသားအဖြစ် လက်ခံရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) မိမိပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းသည် ဤအသင်းဝင်ဖြစ်စေကာမူ မိမိအနေဖြင့် တစ်ဦးချင်းအသင်းသား အဖြစ်လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) အသင်း၏အကျိုးစီးပွါး ပျက်စီးအောင်သော်လည်းကောင်း၊ အသင်း၏ဂုဏ်သိက္ခာသေးသိမ်ညှိုးနွမ်း အောင်သော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သောအသင်းသားများ၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အမှုဆောင်အဖွဲ့က အသင်းဝင်အဖြစ်မှရပ်စဲနိုင်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) အစိုးရအပြစ်ဒါဏ် ကျခံရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ စိတ္တဇဝေဒနာ စွဲကပ်လျှင်သော်လည်းကောင်း အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ အသင်းသားဆက်လက်ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိ၊ မရှိကိုကိစ္စတစ်ခုချင်းအလိုက် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၃) မိမိသဘောဆန္ဒအရ အသင်းဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်လိုပါကလည်း တင်ပြလျှောက်ထား နှုတ်ထွက် ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) တစ်ဦးချင်းအသင်းသားများအတွက် တစ်ဦးလျှင်အသင်းစဝင်လျှင်ဝင်ခြင်း ဝင်ကြေးအဖြစ် (၁၅၀၀)ကျပ်ကိုပေးသွင်းရမည်။ ဤပေးသွင်းမှုသည် တစ်ကြိမ်သာဖြစ်စေရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) အဖွဲ့အစည်း(သို့)ကျောင်း၊ အလုပ်ရုံအလိုက်အသင်းဝင်များသည် အသင်းဝင်အဖြစ် လက်ခံလျှင် လက်ခံခြင်း၊ ဝင်ကြေးအဖြစ် (၇၅၀၀)ကျပ်တိတိထည့်ဝင်ရမည်။ ဤထည့်ဝင်မှုသည် တစ်ကြိမ်သာဖြစ်စေရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) တစ်ဦးချင်းအသင်းသားအနေဖြင့် နှစ်စဉ်ကြေးကိုတစ်နှစ်လျှင်(၁၀၀၀)ကျပ် နှစ်စဉ်ထည့်ဝင်ရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ (၂) အသက်(၆၀) ပြည့်ပြီးသော အသင်းသားများသည် နှစ်စဉ်ကြေးပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။
အပိုဒ်ခွဲ(၃) အဖွဲ့အစည်း(သို့)ကျောင်း၊ အလုပ်ရုံအလိုက် အသင်းဝင်များသည် အသင်းနှစ်စဉ်ကြေးအဖြစ် တစ်နှစ်လျှင်(၅၀၀၀)ကျပ်တိတိ နှစ်စဉ်ထည့်ဝင်ရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၄) အသင်း၏ဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးများကို အခါအားလျှော်စွာ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးများမှ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) သင်းလုံး ကျွတ်စည်းဝေးတွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သော မျက်မမြင်(၂၁)ဦးပါ အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ဆိုလိုသည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်း ညှိနှိုင်း၍ တိုးချဲ့အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဂုဏ်ထူးဆောင် အသင်းသား များမှ သော်လည်​ကောင်း၊ အခြားသင့်တော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များမှလည်းကောင်း တိုးချဲ့ခန့်ထားနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် (၉)ဦးထက်မပိုရ။
ဗဟိုအမှုဆောင်အရာရှိအားလုံးနှင့် ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့မှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်(၄)ယောက် ပေါင်း(၁၁)ဦးကိုခေါ်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် အသင်းသားအားလုံး တက်ရောက်ခွင့်ရှိသော စည်းဝေးကို အမှုဆောင်အများစု တောင်းဆိုသည့် အချိန်တွင်ခေါ်ယူနိုင်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) တစ်ဦးချင်းအလိုက်၊ အဖွဲ့အစည်း(သို့)ကျောင်း၊ အလုပ်ရုံအလိုက် အသင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသူအားလုံးတက်နိုင်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၃) အသင်းမှဆက်သွယ်၍ ရသော အသင်းသားစာရင်း၏ ၅၁ရာခိုင်နှုန်း တက်ရောက်မှသာ စည်းဝေးအထမြောက်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၄) နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ခေါ်ယူရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၅) ဘတ်ဂျက်အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၆) ဗဟိုအမှုဆောင်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးရမည်
အပိုဒ်ခွဲ(၇) လိုအပ်လာသည့်အခါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း ပြင်ဆင်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။
အပိုဒ်(၁၈) ဗဟို အမှုဆောင်စည်းဝေး
အပိုဒ်ခွဲ(၁) ဗဟိုအမှုဆောင် စည်းဝေးကိုတစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ခေါ်ယူရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) ဗဟိုအမှုဆောင်စည်းဝေးသည် သင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေးမတိုင်မှီ သင်းလုံးကျွတ်၏ကိုယ်စား အသင်း၏ တိုးတက်ရာတိုးတက်မှုများအတွက် စည်းဝေးဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၃) ဗဟိုအမှုဆောင် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးကို အနီးဆုံးသင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေးသို့တင်ပြ အစီရင်ခံရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၄) ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ပုံမှန်(သို့) အထူးစည်းဝေးများကို ကျင်းပနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက အမှုဆောင်များ အများစုတောင်းဆိုသည့် အချိန်တွင်ခေါ်ယူနိုင်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့အစည်းဝေးကို ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ စည်းဝေးနှစ်ခုအကြား လိုအပ်သလိုခေါ်ယူနိုင်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းဝေးသည် ဗဟိုအမှုဆောင်စည်းဝေးမတိုင်မီ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့၏ကိုယ်စား အသင်းတိုးတက်ရာ တိုးတက်မှုအတွက် စည်းဝေးဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၃) အလုပ်အမှုဆောင်စည်းဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အနီးဆုံးဗဟိုအမှုဆောင်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၄) အလုပ်အမှုဆောင်၏ ပုံမှန်(သို့) အထူးအစည်းအဝေးများကို ကျင်းပနိုင်သည်။ အထူးအစည်းအဝေး များကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးက အချိန်မရွေးခေါ်ယူနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက အမှုဆောင်အများစုတောင်းဆို သည့်အချိန်တွင် ခေါ်ယူနိုင်သည်။
အပိုဒ်(၂၀) သင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေးသို့ တက်ရောက်သူများထဲမှသာ တစ်ဦးချင်းကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်း(သို့) ကျောင်း၊ အလုပ်ရုံကိုယ်စားလှယ် အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဗဟိုအမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခွင့်ရှိသည်။
အပိုဒ်(၂၁) ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ရန် တစ်ဦးချင်းကိုယ်စားလှယ်များကို သင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေးမှ တိုက်ရိုက်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရမည်။
အပိုဒ်(၂၂) ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ရန် အဖွဲ့အစည်း(သို့)ကျောင်း၊ အလုပ်ရုံကိုယ်စားလှယ်များကို အနည်းဆုံး (၄၀) ဦးမှ (၁၅၀) ကြားရှိလူဦးရေတွင် တစ်ယောက်နှင့် (၁၅၀) ထက်ကျော်ပါက နှစ်ယောက် ကိုယ်စားလှယ် စေလွှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အပိုဒ်(၂၃) အဖွဲ့အစည်း(သို့)ကျောင်း၊ အလုပ်ရုံ၏လူဦးရေကိုတွက်ရာတွင်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူများကိုသာ ဆိုလိုပါ သည်။
အပိုဒ်(၂၄) အစုအဖွဲ့များမှ စေလွှတ်သောကိုယ်စားလှယ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျောင်း၊ အလုပ်ရုံများမှ စေလွှတ်သော ကိုယ်စားလှယ်များကို သင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဗဟိုအမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် အတည်ပြုရမည်။
အပိုဒ် (၂၅) ဥက္ကဋ္ဌ ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမှူးနေရာများအတွက် နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ထက်ပို၍ ရွေးချယ်ခံခြင်းမပြုရ။
အပိုဒ်(၂၆) ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းသားများနှင့် မိတ်ဆွေအသင်းသားများမှအပ အသင်းသားအားလုံး ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရာ၌ လည်းကောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအတည်ပြုရာ၌လည်းကောင်း၊ လူတစ်ဦးတစ်မဲနှုန်း​ပေးပိုင် ခွင့်ရှိသည်။ ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းသားများမှာမူ ပြောရေးဆိုခွင့်နှင့် အကြံပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အပိုဒ်(၂၇) မဲပေးခြင်းစနစ်သည် နှုတ်အားဖြင့်တစ်ဦးစီကို ခေါ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ လက်ပြခြင်းဖြင့်လည်း ကောင်း၊ လျှို့ဝှက်မဲပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း (သို့) ၎င်းထက်ပို၍ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ တောင်းခံသကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ရွေးချယ်ခံမည့်သူ တစ်ဦးထက်ပိုပါက လျှို့ဝှက် စနစ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အပိုဒ်(၂၈) ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲမည်ထင်ရသော မေးခွန်းများကိုမှတ်ပုံတင်ထားသော မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကိုယ် စားလှယ်များအားလုံးကြားတွင် မဲပုံးများကိုအမှုဆောင်အဖွဲ့က ချပေးထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အပိုဒ်(၂၉) မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ အသင်းဝင် ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အပိုဒ်(၃၀) အမှုဆောင်အဖွဲ့များသည် အသင်း၏အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံဖြစ်သည်။
အပိုဒ်(၃၁) အမှုဆောင်အဖွဲများသည် အသင်းကိစ္စအဝဝနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတို့အားလုံးကို အုပ်ချုပ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု တို့ကိုတိုက်ရိုက် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်များလည်းရှိသည်။
အပိုဒ်(၃၂) အမှုဆောင်များသည်အသင်း၏ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး အချိန်မရွေး၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အသင်း၏ရုံးသို့ မေးမြန်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) ဥက္ကဋ္ဌသည်သင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေးမှစ၍ ယင်းကိုယ်တိုင်တက်သော စည်းဝေးများအားလုံးတွင် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) အသင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေများကို စီမံကွပ်ကဲရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) ယင်းတို့သည် အသင်းခွဲများဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်နှင့် အသင်းသားဦးရေ တိုးတက်စေရန်စည်းရုံးရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) ဥက္ကဋ္ဌမတက်ရောက်နိုင်သော စည်းဝေးများတွင် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးဦးမှ သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက် ရန်ဖြစ်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၃) ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် ရာထူးမှနှုတ်ထွက်သောအခါ၊ ကာလကြာမြင့်စွာ မတက်ရောက်နိုင်သည့်အခါ တစ်စုံ တစ်ခုသော အကြောင်းကိစ္စကြောင့် ထာဝစဉ်ဆက်လက်မဆောင်ရွက်နိုင်သောအခါ (သို့) ကွယ်လွန်သောအခါ အရေးပေါ်ဗဟိုအမှုဆောင်အစည်းဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) အသင်းမှကျင်းပသော စည်းဝေးတိုင်းတွင် စည်းဝေးအစီအစဉ်ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။ စာပေး စာယူလုပ်ခြင်း၊ စည်းဝေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကို သေချာစွာစီစစ်ရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) ရုံးသို့အခါအားလျှော်စွာ လာရောက် ကြည့်ရှုစီမံကွပ်ကဲပြီး စည်းဝေးဆုံးဖြတ်ထားသောကိစ္စများ ဆေင်ရွက်ပြီးစီးခြင်းရှိ၊ မရှိ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၃) ကမ္ဘာ့မျက်မမြင်သမဂ္ဂအဖွဲ့များနှင့်တကွ အခြားသောမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင် ရွက်ခြင်းကိုတာဝန်ယူရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ (၄) အသင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဒေသဆိုင်ရာ အသင်းရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးသည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအား ကူညီရမည့်အပြင် အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူးမရှိသောအခါ ယင်း၏တာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရမည်။ စည်းရုံးရေးကဏ္ဍတွင်လည်း တာဝန်ယူဆောင် ရွက်ရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) ဘဏ္ဍာရေးမှူးသည် အသင်း၏ငွေကြေးများနှင့် ကောက်ခံရရှိသောငွေများကို အသင်း၏အသိအမှတ် ပြုထားသောဘဏ်၌ အပ်နှံထားရမည်။ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရာတွင် အသင်း၏ငွေကြေးမူဝါဒအတိုင်း စာရင်းဖွင့်၍ ငွေထုတ်သည့်အခါ နှစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုး၍ ထုတ်ရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) အသင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ငွေကြေးများ ရှာဖွေထိန်းသိမ်းရေး၊ လက်ခံထုတ်ပေးရေးကိစ္စရပ်များကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရေးဆွဲ၍ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၁) တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူးသည် အသင်း၏ငွေကြေးအဝင် အထွက်များကို မျက်ခြေမပြတ်လေ့လာကြည့်ရှု ရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၂) သင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေး မတိုင်မှီ သင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေးသို့ တင်သွင်းရမည့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်း တမ်းကိုအချိန်မှီကူညီစစ်ဆေးပေးရမည်။
အပိုဒ်ခွဲ(၃) တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူးသည် ဘဏ္ဍာရေးမှူး၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကူညီထမ်းဆောင်ရမည့်အပြင် ဘဏ္ဍာရေးမှူးမရှိသည့်အခါ ၎င်း၏တာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရမည်။
အပိုဒ်(၃၉) အသင်းကိုကိုယ်စားပြု၍ အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ မျက်မမြင်များသမဂ္ဂ နှင့်ကမ္ဘာ့မျက်မမြင်များ သမဂ္ဂစသော ပြည်ပအစည်းအဝေးများသို့ အနည်းဆုံးအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်ရမည်။
အပိုဒ်(၄၀) အသင်း၏ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကို ပြက္ခဒိန်နှစ်ဖြစ်သော ဇန်နဝါရီ(၁)ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ(၃၁)ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်သည်။
အပိုဒ်(၄၁) တစ်ဦးချင်းအသင်းသားများနှင့် အသင်းအဖွဲ့လိုက်အသင်းသားများထံမှ ဝင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေး ကောက်ခံခြင်းဖြင့် ဘဏ္ဍာရှာဖွေမည်။
အပိုဒ်(၄၂) အသင်းသား၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ မိမိတို့သဘော ဆန္ဒအလျှောက် အလှူထည့်ဝင်ခြင်းကို လက်ခံခြင်းဖြင့် ဘဏ္ဍာရှာဖွေမည်။
အပိုဒ်(၄၃) ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် အသင်းအဖွဲ့မဆို နှောင်ကြိုးမဲ့မေတ္တာစေတနာ စိတ်သက်သက် ဖြင့်ပေးလှူသောအလှူငွေကို လက်ခံခြင်းဖြင့် ဘဏ္ဍာရှာဖွေမည်။
အပိုဒ်(၄၄) အသင်း၏ကော်မတီအဆင့်ဆင့်မှ စည်းဝေးဆုံးဖြတ်ပြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည် ဖေါ်ခြင်းဖြင့် ဘဏ္ဍာရှာဖွေမည်။ ၎င်းအပြင်အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများသို့ လုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းခြင်းဖြင့် ရံပုံငွေရှာဖွေမည်။
အပိုဒ်(၄၅) အသင်း၏ ဘဏ္ဍာငွေများကို သက်ဆိုင်ရာကော်မတီအဆင့်ဆင့်မှ စည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သာ သုံးစွဲမည်။
အပိုဒ်(၄၆) ဤဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို မည်သည့်သင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေးတွင်မဆို တက်ရောက်သူအသင်းသား သုံးပုံနှစ်ပုံ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
အပိုဒ်(၄၇) သို့ရာတွင်ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းပြင်ဆင်ချက်အား သင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေးမကျင်းပမှီနှစ်လကြို၍ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး လက်ထဲသို့ပေးပို့ရမည်။
အပိုဒ်(၄၈) အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပြင်ဆင်ချက်နှင့်တကွ တင်သွင်းသူများ၏ အမည်စာရင်းကိုမဲပေးနိုင်သူများ အားသင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေးမကျင်းပမှီ(၄)ပတ်ကြိုတင်ဖြန့်ဝေပြီး သင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေးသို့တိုင် အကြောင်းအ ရာကိုလုံးဝပြောင်းလည်းခြင်းမပြုလုပ်ရ။
အပိုဒ်(၄၉) မြန်မာနိုင်ငံမျက်မမြင်များအသင်းအား ဖျက်သိမ်းရန်အကြောင်းပေါ်ပေါက်လာပါက သင်းလုံးကျွတ် စည်းဝေးခေါ်ယူပြီးသင်းဝင် ၇၅ရာခိုင်နှုန်း၏မဲဆန္ဒဖြင့်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
အပိုဒ်(၅၀) ဖျက်သိမ်းသည့်အခါ အသင်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သာ ခွဲဝေသတ်မှတ်ရမည်။
+95 936410672 , +95 9262247078
No.(530/A), Awaiyar Street,Nant Thar Gone Quarter, Insein Township, Yangon.
MOU with Siloam Centre
Copyright@Myanmar National Association of the Blind 2017